Nepali Rashifal 2075: Get latest daily horoscope, weekly horoscope over here. Horoscope describes your fortune foraday.
Yearly Nepali Horoscope:
वि.सं. 2075 को वार्षिक राशिफल
(१) मेष : चु-चे-चो-ला-लि-लु-ले-लो-अ
यो वर्षको सुरुमा विद्या–बुद्धिका अधिपति बृहस्पतिको अनुकूलताले विद्यामा विशेष प्रगति हुनेछ । बौद्धिक प्रभाव बढ्नेछ । आफन्तजनको सहयोगले विशेष फाइदा होला । मांगलिक कर्म र परोपकारजन्य कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् । स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय छ । नयाँ नोकरी, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण सम्भावित छ । मानसम्मान पाइनेछ । व्यापार व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ । लगानीको प्रतिफल प्रशस्त मिल्नेछ । सञ्चित रकम खर्च भए पनि आम्दानीको स्रोत सबल बन्नेछ । कृषि उत्पादन बढ्नेछ । जेठ १५ पछि बृहस्पतिको स्थानान्तरणले केही समस्या आउन सक्छन् । शनि र राहुको गोचरीय स्थिति समेत केही प्रतिकूल देखिन्छ । यसले पारिवारिक असमझदारी, कष्ट, जीवनसाथीलाई अस्वस्थता र रोग, बन्धन, आरोप, जरिवाना जस्ता विघ्नबाधा आइपर्ने सम्भावना छ । नसा, जोर्नी वा गुप्तांगसम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ । अनावश्यक खर्च र ऋणभार समेत बढ्ने देखिन्छ । बगलामुखी भगवती, काली भगवती र बटुक भैरवको उपासना, शनि÷राहुको मन्त्रजप आदि गर्नाले लाभ मिल्नेछ ।
(२) वृष : इ-उ-ए-ओ-वा-वि-वु-वे-वो
(३) मिथुन : का-कि-कु-घ-ङ-छ-के-को-हा
(४) कर्कट : हि-हु-हे-हो-डा-डि-डु-डे-डो
(५) सिंह : मा-मि-मु-मे-मो-टा-टि-टु-टे
(६) कन्या : टो-पा-पि-पु-ष-ण-ठ-पे-पो
(७) तुला : रा-रि-रु-रे-रो-ता-ति-तु-ते
(८) वृश्चिक : तो-ना-नि-नु-ने-नो-या-यि-यु
(९) धनु : ये-यो-भा-भि-भु-धा-फा-ढा-भे
(१०) मकर : भो-भो-जा-जि-जु-जे-जो-ख-खि-खु-खे-खो-गा-गि
(११) कुम्भ : गु-गे-गो-सा-सि-सु-से-सो-दा
(१२) मीन : दि-दु-थ-झ-ञ-दे-दो-चा-चि
Dainik Rashifal Dialy horoscope monthly horoscope Rashifal in Nepali Saral Nepali Horosope नेपाली दैनिक राशिफल